Ukuhamba ngaphandle kweVisa kusuka ePalestine kuya eSt Kitts naseNevis manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSaint Kitts neNevis » Ukuhamba ngaphandle kweVisa kusuka ePalestine kuya eSt Kitts naseNevis manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • IPalestine Breaking News • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSaint Kitts neNevis • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ukuhamba ngaphandle kweVisa kusuka ePalestine kuya eSt Kitts naseNevis manje.
IPalestine yisizwe sesine ukwenza ubudlelwano bezokuxhumana ngokusemthethweni neSt Kitts neNevis ngemuva kweBurkina Faso, iGabon, ne-Egypt emasontweni amane edlule.
ISt Kitts neNevis Tourism iqopha isivumelwano sesine samanxusa esikhathini esingaphansi kwamasonto amane.
Ukuyekelwa kwamahhala kwamaVisa kuvumela ukuhamba ngaphandle kwemikhawulo kuzakhamizi zezizwe ezisayina isivumelwano.
Leli lungelo lidlulela nakubantu abathole ubuzwe ngezindlela zezomnotho.
UNdunankulu waseNevis kanye noNgqongqoshe Wezangaphandle waseSt Kitts naseNevis, Mnu. UMark Brantley ubelokhu ekwakhela ubudlelwano bamazwe ngenkuthalo ngenyanga edlule.
Ngesikhathi kukhunjulwa iminyaka engama-60 yeNhlangano Engahambelani Nokwenzelela eSerbia kuleli sonto, uNgqongqoshe uBrantley usayine isivumelwano sokuyekelwa kwama-visa nePalestine.
Palestine yisizwe sesine ukwenza ubudlelwano bamanxusa ngokusemthethweni ISt Kitts noNevis ngemuva kweBurkina Faso, iGabon, ne-Egypt emasontweni amane edlule.
“Usuku oluyingqophamlando lukaSt Kitts noNevis njengoba sisayina [isivumelwano] sokuhlehliswa kwesivumelwano se-visa no-HE Riad Maliki onguNgqongqoshe Wezangaphandle [wase] State of Palestine esivumela ukuhamba ngaphandle kwama-visa phakathi kwabantu bethu ababili. USt Kitts noNevis bayaqhubeka nokwandisa izingqinamba zabo zamanxusa emhlabeni jikelele, ”kubhala uNgqongqoshe uBrantley ku-Instagram.
Ukuyekelwa kwamahhala kwamaVisa kuvumela ukuhamba ngaphandle kwemikhawulo kuzakhamizi zezizwe ezisayina isivumelwano. Lokhu kusho ukuthi i-visa yokungena ayidingeki kubantu bakuleli noma yiliphi izwe ngaphambi kokungena ezweni isivumelwano esisayiniwe. Leli lungelo lidlulela nakubantu abathole ubuzwe ngezindlela zezomnotho, njenge ISt Kitts noNevisUhlelo Lobuzwe Bokutshalwa Kwezimali (i-CBI).
The State of Palestine, okungezwe okusha sha ohlwini olwandayo lweSt Kitts neNevis lweminikelo yokuhamba engenama-visa, ivumela izakhamizi zayo ukuthi zingene ezindaweni ezingaba ngu-35. Kodwa-ke, njengoba kunezigidi zabantu basePalestine ezihlala ngaphakathi ngenxa yokungazinzi kwezepolitiki, abaningi babhekana nobunzima bokuhambela amazwe omhlaba noma ngisho nokubuyela ezweni labo.
Ngalesi sivumelwano "esingumlando", abahlali basePalestine kanye nosomabhizinisi abakhethe ukubamba iqhaza kuhlelo lwe-CBI lwaseSt Kitts naseNevis ngokuvamile bangahamba ngaphandle kwama-visa hhayi ePalestine kuphela kodwa nakwamanye amazwe nezindawo ezibalelwa ku-160, kubandakanya nemfundo emaphakathi nezindawo zamabhizinisi.
Ezokuvakasha Seychelles Zilungiselela i-IFTM Top Resa e ...
I-Delta Air Lines: Ukubhukha okusha kwamazwe ngamazwe kufinyelela ku-450...
ILufthansa ingeza izindiza ezine ezintsha ze-Airbus A350-900 emikhunjini
Amadolobha ahamba phambili emhlabeni obuciko basemgwaqweni – avela eNew...
Ukuvakasha Komshado: Ukuphefumula Impilo Entsha Ekuhambeni kanye...
Ubuhlungu Beqolo Obungamahlalakhona: Okungokoqobo Okusha Okubonakalayo Okusha...
I-Holland America Line isibuyile ebhizinisini